နဂါးသည် တရုတ် နှင့် အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင် ဒဏာရီထဲမှ နတ်ကောင် ဖြစ်သည်။ ‘မြင့်မြတ်’သော အဓိပ္ပါယ် ကိုဆောင်သည်။ ခြူးကောင်သည် တရုတ် ဒဏာရီထဲ မှ မေတ္တာ၊ မင်္ဂလာ ရှိသော အကောင် ဖြစ်သည်။ သဘောထားနူးညံ့ပြီး နှစ်ပေါင်း ၂ ထောင် အသက်ရှင်နိုင်သည်။ ခြူးကောင်ပေါ်လာသော ခေတ်တိုင်းသည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းသော ခေတ်ကောင်း ဖြစ် နေသည်။ ‘အေးချမ်း မင်္ဂလာ’ ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ခြူးကောင်သည် ဇာမဏီ ကဲ့သို့ပင် အထီး နှင့် အမ ရှိသည်။ အထီးကို ချီ ဟု ခေါ်ပြီး အမကို လျင် ဟုခေါ်သည်။ ဠုန်ချီ(လုပ်ငန်းစု)၏ အတွေးသည် နဂါး နှင့် ခြူးကောင်တို့၏အဓိပ္ပါယ်မှ ဆင်းသက်လာသည်။ ‘ကြီးမြတ်ခြင်း နှင့် အေးချမ်းမင်္ဂလာ’ ကို အလေးထားသည်။ ၎င်း၏အင်အား မှာ လူများကို သာယာသော ဘဝစိတ်ကူးယဥ်ရန် နှိုးဆွပေးခြင်းဖြစ်သည်။ လူကို မျှော်လင့်ချက်၊ မင်္ဂလာ နှင့် ပျော်ရွင်မှု ပေးအပ်သည်။ လူများအတွက် မျိုးဆက်၊ ကံကောင်းခြင်း၊ အလင်းရောင် ယူဆောင် လာနိုင်သည်။ ကြီးမြတ်ခြင်း၊ မေတ္တာ ဂရုဏာ၊ အေးချမ်း မင်္ဂလာတို့ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
ဠုန်ချီ (လုပ်ငန်းစု) လက်အောက်ရှိ ကုမ္ပဏီနှင့် ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်
၁။ ဠုန်ချီ ကုန်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက်. (LONG QI COMPANY LIMITED) အဓိကအားဖြင့် လိဒါကွန်ပရပ်ဆာ ကိုကိုယ်စား လှယ်ယူ ရောင်းချသည်။
၂။ ဠုန်ချီ ပရိဘောဂ(LONG QI FURNITURE) ဠုန်ချီ(လုပ်ငန်းစု)မှ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ကိုင်သော ပရိဘောဂတံဆိပ် ဖြစ်သည်။
အဆင့်မြင့် မဟော်ဂနီ ပရိဘောဂ နှင့် ခေတ်သစ် ရုံးသုံး ပရိဘောဂကို အဓိက လုပ်ကိုင်သည်။ အဆင့်မြင့် မဟော်ဂနီ ပရိဘောဂများကို အကောင်းစား ရွှေချည် ဆိတ်နံ(Phoebe Zhennan)သစ် နှင့် သမလန်းသစ်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ အနုစိတ် ထုဆစ်ထုတ်လုပ်ပြီးမှ ပရိဘောဂ ဖြစ်လာသည်။၎င်း၏ ပုံစံမှာ အဓိကအားဖြင့် တရုတ်ပုံစံ ပရိဘောဂထဲမှ “သားစဉ်မြေးဆက် အမွေ လက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်သော” တစ်ခုတည်းသာ ရှိသော နှင့် တန်ဖိုးကြီးသော ပုံစံ ဖြစ်သည်။ “မင်ခေတ်၏ မဟာဆန်ခြင်း နှင့် မန်ချူးခေတ်၏ ခမ်းနားခြင်း”တို့ကို ဖော်ပြနေသည်။ ခေတ်သစ် ရုံးသုံးပရိဘောဂများ ကို ရိုးရှင်းသော ပုံစံ နှင့် ခေတ်သစ် ပုံစံ ဒီဇိုင်းထားသည်။ ပရိဘောဂ၏ ထူးခြားမှုကို ပိုမို မြင်သစေသည်။ လူ့ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ခေတ်၏ အလှတို့ဖြင့် ပြည့်နက်နေသည်။
ဠုန်ချီ(လုပ်ငန်းစု)သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး ပရိဘောဂ ဆိုင်အုပ်စုကို တည်ထောင်လျက်ရှိသည်။ ရန်ကုန်လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင်ဧရိယာ စတုရန်း မီတာ ၃ ထောင် ရှိသော ၄ ထပ်အဆောက်အဦးကို ပင်မပရိဘောဂပြခန်း (ပြခန်း ၁)အဖြစ်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ထို့ပြင် “ကာစတန်မာကို အလေးထား”သော ဝန်ဆောင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန် ထောင့်စေ့အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လှိုင်သာယာမြို့နယ်ပင်မပြခန်း အရောင်းဗဟို အနီးတဝိုက် နှင့် ရန်ကုန်မြို့လယ် စီးပွားရေး နယ်မြေတွင် ပြခန်း ၂ နှင့် ပြခန်း ၃ ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
ဠုန်ချီ ပရိဘောဂမှ ပြသသော ကုန်ပစ္စည်းတွင် ကုတင်၊ ဧည့်ခန်း ပစ္စည်းဖြစ်စေ၊ အလှဆင်ပစ္စည်းဖြစ်စေ၊ ရုံးသုံး စားပွဲ နှင့် ထိုင်ခုံ ဖြစ်စေ အားလုံးတွင် တရုတ်ရိုးရာ မင်္ဂလာ ယဉ်ကျေးမှု ပါဝင်နေသည်။ ထို့ပြင် အဆင့်မြင့် အုပ်ချုပ်ရေး ဝန်ထမ်းနှင့် သင့်လျော်သော ရုံးခန်း ပစ္စည်းများကိုလည်း အသေးစိတ် ရွေးချယ်ထားသည်။ ဂန္ထဝင်ပုံစံ ပရိဘောဂမှခေတ်သစ် ပရိဘောဂအထိ ပစ္စည်းတိုင်းသည် လက်ရာမြောက်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည်။ ခမ်းနားပြီး ခေတ်မီသည်။ လှပပြီး လက်တွေ့ အသုံးဝင်သည်။ ထူးခြားချက်နှင့် ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေသည်။အထူးသဖြင့် ဈေးနှုန်း နှင့် အရည်အသွေ း၏ အချိုး အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ မြို့ပြနေထိုင်သူများ၏ “အဆင့်မြင့်ပြီး ဈေးမကြီးသော” စားသုံးမှု အတွေးကို လုံးဝ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
ဠုန်ချီ(လုပ်ငန်းစု)၏ ကုန်ပစ္စည်းကို ဆန်းသစ်ဖော်ထုတ်၊ ထုတ်လုပ်၊ ရောင်းချ၊ ဝန်ဆောင်မှုတို့ကို တသားတည်းဖြစ်အောင် ပေါင်းစပ်ထားသော ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သည်။ ISO9000 အရည်အသွေး လက်မှတ် ရရှိထားပြီး စက်ရုံမှ ထွက်သော ပစ္စည်းတိုင်း၏ အရည်အသွေးသည် တင်းကျပ်သော စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီရန် အာမခံပေးသည်။ ဠုန်ချီပရိဘောဂသည် ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သော ပစ္စည်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဈေးကွက် လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီပြီး စားသုံးသူ၏ နှစ်သက်မှုကို ရရှိစေရန် ပစ္စည်းကို သုတေသနလုပ် ဖော်ထုတ်သော ကာလ၌ပင် နက်နဲစွာ စုံစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။ စက်ရုံ၊ ကုမ္ပဏီ၊ မြို့ပြနေထိုင်သူတို့ နေထိုင်သော တိုက်ခန်း နှင့် လုံးချင်းအိမ်သို့ လက်တွေ့ သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် အပူပိုင်း မုတ်သုန်ရာသီဥတု ဖြစ်ပြီး ၁ နှစ်လျှင် ၃ ရာသီ (နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း) ထင်ရှားသည်။ ဤထူးခြားချက်ကို လိုက်ပြီး ခေတ်မီသော သစ် အခြောက်ခံ၊ အဆီထုတ်သော နည်းပညာ နှင့် တန်ဆာပလာကို တင်သွင်းခဲ့သည်။ သစ်ကို အခြောက်ခံပြီး အစိုဓာတ် နှင့် အပူ သံသရာ လည်ပတ်သော ရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့် ပရိဘောဂ ပစ္စည်းများ အရည်အသွေး ပြောင်းလဲသွားခြင်းကို ရှောင်ရှားသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ စားသုံးသူသည် ဠုန်ချီ ပရိဘောဂ ဝယ်ယူပြီးနောက် ပစ္စည်း၏ ဒီဇိုင်း နှင့် ပြောင်မြောက်သော အရည်အသွေးကို လွန်စွာ အသိအမှတ်ပြု ကောင်းချီးပေး
ကြသည်။ ဠုန်ချီ ပရိဘောဂသည် လက်ရှိ “ကောင်းချီးပေးခံရသော အမှတ်တံဆိပ်”ကို အခြေခံပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်နေထိုင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကို ပိုမို လှပစွာ ဖွံ့ဖြိုးစေရန် ကြိုးစားမည်။ ဠုန်ချီ(လုပ်ငန်းစု)သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်ပြီး အရင်းအမြစ်များစုစည်းကာ လုပ်ငန်းကို အဆက်မပြတ် ချဲ့ထွင်မည်။ ထိုမှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြေချပြီး အာဆီယမ်သို့ လျှောက်လှမ်းကာ တကမ္ဘာလုံးနှင့် ချိတ်ဆက်မည်။ လုပ်ငန်းစု ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သန်မာသော အားအင် ပေးအပ်မည်။ လုပ်ငန်းစု၏ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်မှာ ဆန်းသစ်ဖန်တီးမှုဖြင့် ဠုန်ချီ စိတ်ဓာတ်ကို ဖြန့်ဝေမည်။ နဂါး တဟုန်ထိုး ပျံသန်းသကဲ့သို့ စားသုံးသူနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖော်အတွက် ဘက်စုံသော ဝန်ဆောင်မှုပေးပြီး ၂ဖက်စလုံး အောင်မြင်စေရန် အတူတကွ ကြိုးစားကြမည်။.
Power By SITES.COM.MM မှတ်ချက်ပေး:0.0283 စက္ကန့်